लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वायुनाइकी वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
“प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईं र तपाईंको घरमा हुनेहरूको उद्धार हुनेछ।”—प्रेषित १६:३१.
यी शब्दहरू प्रेषित पावल र सिलासले फिलिप्पीको म्यासिडोनिया सहरका जेलरलाई भनेका थिए। ती शब्दहरूको अर्थ के हो? मृत्युबाट छुटकारा पाउन येशूमा विश्वास गर्नु आवश्यक छ। तर यो कुरा बुझ्न पहिला मानिस किन मर्छन्‌ भनी थाह पाउनु पर्छ। यसबारे बाइबलले के सिकाउँछ अब हामी विचार गरौं।
मानिसलाई मर्न सृष्टि गरिएको थिएन
“परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैंचामा त्यो गोड-गाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। औ उहाँले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुभयो, ‘बगैंचाका सबै रूखका फल तैंले संकोच नमानी खाए हुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल चाहिं नखानू, किनभने जुन दिन तैंले त्यो खान्छस् त्यसै दिन तँ मर्नेछस्।’”—उत्पत्ति २:१५-१७.
परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई अदनको बगैंचामा राख्नुभयो। रूख-बिरुवाले भरिएको त्यो सुन्दर बगैंचामा थुप्रै जनावर थिए। त्यहाँ विभिन्न फल फल्ने रूखबाट आदमले विना रोकटोक खान सक्थे। तर एउटा विशेष रूखबाट चाहिं खान नहुने कुरा यहोवा परमेश्वरले आदमलाई स्पष्ट बताउनुभयो। त्यस रूखको फल खाएमा तिनी मर्ने थिए भनेर पनि उहाँले चेतावनी दिनुभयो।
के आदमले परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनी बुझे? मृत्यु हुनु भनेको के हो, आदमलाई राम्ररी थाह थियो। किनभने तिनले जनावरहरू मरेको देखेका थिए। यदि आदमलाई मर्नकै लागि बनाएको भए त परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनीको कुनै अर्थ रहने थिएन। परमेश्वरको आज्ञा मानेर त्यस निषेधित रूखको फल नखाएमा तिनी सधैंभरि बाँच्न सक्थे भनेर आदमलाई थाह थियो।
कोही-कोही भने निषेधित रूखले यौन सम्बन्धलाई बुझाउँछ भनेर विश्वास गर्छन्‌। तर त्यस्तो हुन सक्दैन। किनभने यहोवा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई “फल्दै-फुल्दै, वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिंदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै” जाओ भनेर आशिष्‌ दिनुभएको थियो। यसको मतलब आदम र हव्वाले सन्तान जन्माएर पृथ्वी भरेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। (उत्पत्ति १:२८) त्यसैले निषेध गरिएको रूख वास्तविक रूख थियो। यहोवा परमेश्वरले त्यस रूखलाई “असल र खराबको ज्ञान दिने रूख” भन्ने नाम दिनुभयो। किनभने त्यस रूखले मानिसजातिको लागि के असल छ र के खराब छ भनेर तय गर्ने अधिकार परमेश्वरको हो भनेर बुझाउँथ्यो। त्यस रूखको फल नखाएर आदमले आज्ञाकारी भएको कुरा देखाउन सक्थे। साथै तिनलाई प्रशस्तै आशिष्‌ अनि जीवन दिनुभएको सृष्टिकर्ताप्रति आभारी भएको कुरा पनि देखाउन सक्थे।
आदम अनाज्ञाकारी भएकोले मर्नु पऱ्यो
“आदमलाई [परमेश्वरले] भन्नुभयो: ‘मैले नखानू भनेको रूखको फल खाएको हुनाले . . . माटोमा नफर्कुञ्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैंले खानेछस्। किनकि माटैबाट तँ निकालिएको थिइस्। तँ माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्।’”—उत्पत्ति ३:१७, १९.
आदमले निषेध गरिएको रूखको फल खाए। यो एउटा गम्भीर कुरा थियो। यहोवा परमेश्वरले गरिदिनुभएको असल कामको तिनले पटक्कै मोल नगरेको देखियो। यो विद्रोह थियो। त्यस रूखको फल खाएर आदमले यहोवा परमेश्वरलाई तिरस्कार गरे अनि आफूखुसी गर्ने बाटो रोजे; जसले गर्दा भयानक परिणाम निम्तियो।
परमेश्वरले आदमलाई “भूमिको माटोबाट” बनाउनुभएको थियो। अनि तिनको मृत्यु हुँदा ‘माटैमा फर्किजानेछ’ भनेर उहाँले बताउनुभयो। यहोवा परमेश्वरले चेतावनी दिनुभएझैं आदम मरे। मृत्युपछि आदमले कुनै रूप धारण गरेनन्‌ न त तिनी अन्त कुनै लोकमा नै गए। तिनी जुन कुराबाट सृष्टि गरिएका थिए त्यहीं फर्के अर्थात्‌ माटोजस्तै निर्जीव भए।—उत्पत्ति २:७; उपदेशक ९:५, १०.
आदमका सन्तान भएकाले हामी पनि मर्छौं
“त्यसैले, एकै जना मानिसद्वारा पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापद्वारा मृत्यु र यसरी मृत्यु सबै मानिसमा व्याप्त भयो, किनकि तिनीहरू सबैले पाप गरेका छन्‌।”—रोमी ५:१२.
आदम अनाज्ञाकारी भएकोले अर्थात्‌ तिनको पापले गर्दा मानिसजातिले ठूलो क्षति भोग्नुपऱ्यो। तिनले ७०/८० वर्षको जीवन मात्र गुमाएनन्‌। बरु सधैंभरि बाँच्न पाउने अवसर नै गुमाए। तिनले त्रुटिरहित अवस्था गुमाउनुका साथै आफ्ना भावी सन्तानमा पनि पाप सारे।
हामी सबै आदमका सन्तान हौं। त्यसैले हामीले जन्मजातै त्रुटिपूर्ण शरीर पाएका छौं। त्यस्तो शरीरले हामीलाई पापतर्फ धकेल्छ अनि अन्तमा मृत्युमा पुऱ्याउँछ। पावलले हाम्रो दयनीय अवस्थालाई यसरी बुझाए: “म भने असिद्ध र पापमा बेचिएको छु। हाय, म कस्तो लाचार मानिस! मृत्युतर्फ धकेलिंदै गरेको यो शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला?” अनि पावल आफैले यस्तो जवाफ दिए: “हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्!”—रोमी ७:१४, २४, २५.
हामी सधैंभरि बाँच्न सकून्‌ भनेर येशूले आफ्नो जीवन दिनुभयो
“बुबाले आफ्नो छोरालाई यस संसारको उद्धारकको रूपमा पठाउनुभएको हो।”—१ यूहन्ना ४:१४.
पापको असर अनि मृत्युको सजायबाट छुटकारा दिन यहोवा परमेश्वरले एउटा प्रबन्ध गर्नुभयो। कसरी? उहाँले आफ्नो प्यारो छोरालाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाउनुभएर। येशू पृथ्वीमा आदमजस्तै त्रुटिरहित व्यक्तिको रूपमा जन्मनुभयो। आदमको ठीक उल्टो येशूले पृथ्वीमा हुनुहुँदा “एउटै पाप गर्नुभएन।” (१ पत्रुस २:२२) आफूमा कुनै पाप नभएको कारण उहाँ सधैंभरि बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो।
तर यहोवा परमेश्वरले येशूलाई आफ्ना शत्रुहरूको हातबाट मारिन दिनुभयो। त्यसको तीन दिनपछि उहाँले येशूलाई मृत्युबाट ब्युँताउनुभयो। येशू स्वर्ग फर्कनको लागि आत्मिक व्यक्तिको रूपमा ब्युँतिनुभयो। स्वर्गमा उहाँले आफ्नो त्रुटिरहित जीवनको मूल्य परमेश्वरसामु टक्य्राउनुभएर आदमका सन्तानलाई पाप र मृत्युबाट छुटकाराको बाटो खोलिदिनुभयो। यहोवा परमेश्वरले येशूको बलिदान स्वीकार्नुभयो। जसले गर्दा येशूमा विश्वास गर्ने हरेकले अनन्त जीवन पाउन सम्भव भयो।—रोमी ३:२३, २४; १ यूहन्ना २:२.
आदमले गुमाएको कुरा येशूले पुनः हासिल गर्नुभयो। हामीले अनन्त जीवन पाओस् भनेर उहाँले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो। बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ: ‘उहाँले मृत्यु भोग्नुभएकोले . . . परमेश्वरको असीम अनुग्रहद्वारा उहाँले हरेक मानिसको लागि मृत्यु चाख्नुभयो।’—हिब्रू २:९.
यस प्रबन्धले हामीलाई यहोवा परमेश्वरबारे थुप्रै कुरा सिकाउँछ। वास्तवमा उहाँको न्यायको उच्च स्तरले गर्दा हामी जस्ता त्रुटिपूर्ण मानिसले आफैलाई पाप र मृत्युबाट छुटकारा दिन असम्भव थियो। तर यहोवा परमेश्वर मायालु र दयालु हुनुभएकोले आफ्नै छोरा दिनुभएर छुटकाराको मोलको प्रबन्ध गर्नुभयो। उहाँ आफैले ठूलो मोल चुकाउनुपरे तापनि न्यायको उच्च स्तर कायम राख्न पछि हट्नुभएन।—रोमी ५:६-८.
येशूलाई पुनर्जीवित गरियो र अरूलाई पनि गरिनेछ
“ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट ब्युँताइनुभएको छ, जो मृत्युको चिर निद्रामा परेकाहरूमध्ये अगौटे फल हुनुहुन्छ। किनकि एकै जना पुरुषले गर्दा मृत्यु आयो, त्यसकारण मरेकाहरू पनि एकै जना पुरुषद्वारा पुनर्जीवित पारिनेछन्‌। जसरी आदमले गर्दा सबै मर्दैछन्‌, त्यसरी नै ख्रीष्टले गर्दा सबैलाई जीवित पारिनेछ।”—१ कोरिन्थी १५:२०-२२.
येशू ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा जीवन बिताउनुभयो अनि मृत्यु भोग्नुभयो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर उहाँ मृत्युबाट ब्युँतनुभएको के कुनै प्रमाण छ? सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त येशू ब्युँतनुभएपछि थुप्रै मानिससामु विभिन्न अवसर र ठाउँहरूमा देखापर्नुभएको थियो। एकपटक उहाँ पाँच सयभन्दा धेरै मानिसहरूकहाँ देखापर्नुभयो। प्रेषित पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई चिठ्ठी लेख्दा येशू ब्युँतनुभएको देख्ने मानिसहरू अझै जिउँदै छन्‌ भनेर उल्लेख गरेका थिए। अनि तिनीहरूले देखेका र सुनेका कुराको बयान दिन सक्ने कुरालाई पनि इङ्गित गर्दै थिए।—१ कोरिन्थी १५:३-८.
पावलले ख्रीष्टलाई ब्युँताइकाहरूमध्ये “अगौटे फल” भनी लेख्दा वास्तवमा तिनले मृत्युबाट ब्युँतनेहरू अरू पनि हुनेछन्‌ भनेर औंल्याउँदै थिए। येशू आफैले पनि ‘चिहानमा हुनेहरू सबै बाहिर निस्किआउने’ समयबारे कुरा गर्नुभएको थियो।—यूहन्ना ५:२८, २९.
अनन्त जीवन पाउन हामीले येशूमा विश्वास गर्नै पर्छ
“परमेश्वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो, ताकि ऊमाथि विश्वास गर्ने हरेक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्।”—यूहन्ना ३:१६.
मानिस किन मर्नुपऱ्यो अनि सुन्दर बगैंचा कसरी गुम्यो भन्ने विषयमा बाइबलका सुरुका पानाहरूमा लेखिएको छ। अनि अन्तिम पानाहरूमा भने मृत्यु सदाका लागि अन्त हुने अनि पृथ्वी फेरि सुन्दर बगैंचामा परिणत हुने विषयमा लेखिएको छ। त्यतिखेर मानिसहरूले सधैंभरि आनन्दित जीवन बिताउन सक्नेछन्‌। प्रकाश २१:४ मा यस्तो लेखिएको पाउँछौं: “मृत्यु हुनेछैन” अनि यो प्रतिज्ञा भरोसायोग्य छ भनी जोड दिन पद ५ मा यस्तो लेखिएको छ: “यी कुराहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्‌।” हो, आफूले गर्नुभएको प्रतिज्ञा यहोवा परमेश्वर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
“यी कुराहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्‌” भनी के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ? येशू ख्रीष्टबारे अझ धेरै सिक्नुहोस् र उहाँमा विश्वास गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने तपाईंले यहोवा परमेश्वरको अनुमोदनका साथै अहिल्यै प्रशस्त आशिष्‌ पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र नभई भविष्यमा यस पृथ्वी सुन्दर बगैंचामा परिणत हुँदा तपाईं सधैंभरि बाँच्न पाउनुहुनेछ। त्यतिखेर “मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ।”